Kudonha kweeuro kunokanganisa sei misika yemasheya? | Ehupfumi Zvemari
Kudonha kweeuro kunokanganisa sei musika wemasheya?
Gore rino, iyo euro inogona kuve yakakosha kwazvo mari yemari yekuona shanduko yemari mumwedzi iri kuuya. Nekuti zviripo, pane chinhu chitsva chakanakisa pachiitiko icho chinogona kubatsira kukoshesa iyo inosarudzika indekisi yemusika wemasheya, iyo Ibex 35. Icho hachisi chimwe kunze kwekudonha kwemari imwechete yeEuropean kupokana nedhora reUS. Nezvikonzeroi? Zvakanaka, kune chimwe chinhu chiri nyore seichi chokwadi chinofarira iyo exports emakambani eSpain, sezvazviri kune vamwe munharaunda yedu yepedyo yehupfumi.
Mupfungwa iyi, kune mamwe makambani akanyorwa paIbex 35 ayo anoteya mabhizinesi avo pane izvo zvinotengeswa kunze kwenyika. Ndivo avo vanonyanya kubatsirwa nekutenda muukoshi hwezvikamu zvavo. Kusvika padanho rekuti vane yakakwira yekuongorora zvakarekana kupfuura mamwe ese. Nematanho anogona kunyange kusvika 20% kana kunyangwe nekuwedzera simba. Hazvishamisi kuti, vanogona kuve kushamisika kukuru kuti gore rino rinogona kutiunzira.
Uye zvakare, hazvigone kukanganwika kuti kubvira munaKurume apfuura kune mamwe maitiro eIbex 35 ari kutsanangura manhamba e inverted bendekete-musoro-bendekete. Asi chakanyanya kukosha ndechekuti ivo vari kuratidza ekutanga zviratidzo zvinovatungamira kune yakajeka kupora mamiriro. Izvo zvavanogona kuwana kwakakosha kudzoreredza kukosha kwavo zvine chekuita negore rapfuura. Inogona kuve pekutangira yekupinda mumisika yekutengesa kuti mari ichengetedze nenzira kwayo. Zvirinani zvinofanirwa kuve chimwe chezvinangwa muzvirongwa zvauri kuzoshandisa kubva panguva dzino chaidzo.
1 Migumisiro yekuderera mueuro
2 Nhanho dzekutarisa mumusika wemasheya
3 Kuumbwa kwekudzokera shure
4 Zvinorehwa neiyo bearish euro
5 Maitiro ekukunda pamusika wemusika
6 Dzimwe sarudzo dzekuita mari
Migumisiro yekuderera mueuro
Kuderera kwemari imwechete yeEurope, kunyanya kurwisa iyo U.S. dhora, inogona kunge iri nhau dzakanaka kune vashoma uye vepakati varimi. Kunyanya mune izvo kuchengetedzeka zvine maonero avo zvakanangana nekudyara. Kusvikira pakuti izvo zvirevo zvemusika wemasheya zvinogona kuve nemabatiro ari nani zvine chekuita nemitengo yakasara yemari yenyika. Zviri mumakambani aya umo iwe unofanirwa kutarisisa hupfumi hwako kana iwe uchida kuwana mubairo wezvaunoita mumisika yemari.
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kuziva kuti kuderera uku kweeuro kunogona kungova kwenguva pfupi. Kana izvo zvakafanana, ichave iine yakaganhurirwa nguva yechokwadi. Izvi mukuita zvinoreva kuti mashandiro ako pamusika wemasheya iwe unofanirwa kuvatora munguva pfupi. Zvese zvisina kufanana neizvozvo ichave iri imwe njodzi yauchazosangana nayo kubva zvino zvichienda mberi. Nekuti nekuda kwezvikonzero zvimwe chete izvi, makambani ataurwa pamusoro anofanira kunge akacheka mumitengo yavo. Mune zvimwe zviitiko pasi pekusimba kukuru mukufamba. Izvo, chirevo chako chemari chinogona kutambura kusvika padanho rekuti mari yakaiswa mari mune izvi zvemari zvinoderera.
Nhanho dzekutarisa mumusika wemasheya
Chero zvazvingaitika, kuongororwa kwehunyanzvi kuchave kwakakodzera kwazvo kutsigira iyi yakasarudzika nzira yekudyara. Kukubatsira iwe mune iri basa, hapana zvirinani kupfuura kuongorora ayo ari akakosha matanho ayo maSpanish equities ane kumberi mumwedzi inotevera. Kubva pamaonero aya, zvinokwanisika kuti kuramba kwekutanga paIbex 35 kunopfuura nepakakosha 10.200 poindi nhanho. Kuti uzvigadzirire pane zvinangwa zvekuda zvikuru izvo zvinokutungamira kuti uzvigadzike iwe munzvimbo yemawindo egore rino, ayo akatenderedza 10.600 uye 10.700 mapoinzi.
Nekuzadzikiswa kwezviitiko izvi, ndiko kuti, euro isina kusimba kupfuura nakare uye kukunda kwenzvimbo idzi dzekumirisana, nzira ingave yakajeka zvinangwa zvakanyanya. Kunyangwe uchitora chenjedzo yekubatanidza matanho ekuchengetedza kuchengetedza ako mashandiro mumisika yemari. Zvirinani iri zano raunofanira kutora kwemwedzi mishoma inotevera yegore rino uye kunyanya maererano nekota yechitatu neyechina yegore. Zvekuti pakupedzisira magadzirirwo ebasa rako pamusika wemasheya awedzere kupfuura zvawaitarisira muna Ndira.
Kuumbwa kwekudzokera shure
Izvo zvakare zvinonakidza kwazvo kuti iwe uzive kuti musika unoratidzika kunge uri kutsanangura, zvingangoita kudzosera kumashure kumatunhu akakwirira a2016. Mupfungwa iyi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti uyu musika wemusika wemasheya unokosheswa zvakanyanya nevashambadziri vadiki nepakati uri kupfuura ingori paramende yekuita zvinobudirira mumisika yemari. Zviri nezve kupora kufamba kuti mutengo weaseti unoita mushure mekurasa nzvimbo yekutsigira mukudonha kwayo. Ndokunge, ndezve mafambiro ekudzokera kune iyo yakarasika tsigiro. Nechikonzero ichi inogona kuve nesimba rakasimba rekusimudzira panguva ino.
Asi rimwe rematambudziko makuru rauinaro nderekuti ungarizivise sei kuti ushandise kune ako equity mashandiro. Ehezve, harisi basa riri nyore, asi zvinopesana, zvinoda a kudzidza kwepamusoro muhunyanzvi hwekuongorora. Hazvishamisi kuti zvakafanana maitiro, mune imwe nhanho mukukwira kumusoro uye, mune imwe, mafambiro ekuderera. Kusvikira pakuti iwe unofanirwa kuona iwo matanho kwaanotangira kugadzirisa zvese zviri zviviri kutengesa uye kutenga kwezvikamu.
Zvinorehwa neiyo bearish euro
Mari imwechete yeEurope ine zvakawanda zvakanaka zvine chekuita nekudyara mari uye zvinomuka kubva kuzviitiko zvakasiyana zvaunofanira kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi. Kwete chete maererano nezvakanakira kuti makambani anotengesa kunze ave nawo, asiwo kune mamwe marudzi ezviito zvaunofanira kuongorora chero nguva. Sezvo iwe uchizokwanisa kutarisa pazasi uine ruzivo rwatiri kuenda kuzokufumura iwe.
Sezvo iwe uchigona kufungidzira, mune ino mamiriro chaiwo, mikana mizhinji inopihwa kune avo vanozvipira ivo, munzira dzayo zhinji, kune kufungidzira kwemari. Iine mukana wekubudirira kuita urwu rudzi rwekuvhiya kubatsira.
Aya marudzi ezviitiko anogona kukonzera kusimudzira kwekufamba mumisika yemari. Nekuti zvinobatsira iyo kunze kwenyika kugona kwemakambani uye izvo zvinofambiswa pamwe nekuwedzera kwemutengo wechengetedzo dzakakanganiswa.
Ehezve, kune makambani ane zviitiko zvinoitirwa kunze kwenzvimbo yakajairika yekondinendi yakare. Zvakanaka, mune ino yako yako mitsara yebhizinesi yaizobatsira pamusoro pechinyakare. Izvi mukuita zvinoreva kuti yavo musika kukosha ichave yakakwira kupfuura kusvika zvino uye iyo iwe yaunogona kutora mukana nekutora zvinzvimbo mune aya maitiro.
Maitiro ekukunda pamusika wemusika
Mukati meichi chirevo chizere, pane akateedzana emasheya ayo anowanzo tenderera kukoshesa kana paine mukana wekuderera kwe euro kutarisana nedhora reUS. Mupfungwa iyi, kana munhu aifanirwa kuratidza kambani inonongedzerwa nevanoongorora vazhinji semubatsiri mukuru wesimba redhora, zviri pachena kuti Grifols. Chingave chimwe chehunhu kuve mune yekudyara portfolio kune yasara yegore uye pamwe kunyange yakatowanda.
Chimwe chezvifambiso zvinosangana nehunhu uhwu ikambani yekuvaka ACS. Hazvishamise kuti imwe yematunhu ane kunyanya kudonhedza mubhizinesi rayo ndeye North America, iyo inoverengera makumi mana muzana ezvekutengeswa. Ferrovial ichapindawo runyorwa urwu rwekudyara. Chikonzero chayo chikuru chiri muchokwadi chekuti bhizinesi rayo guru muNorth America ndiyo migwagwa mikuru, uye zvaizobatsirika kudonha mueuro kutarisana nedhora.
Dzimwe sarudzo dzekuita mari
Cie Automive ndeyechokwadi imwe yedzimwe nzira dzaunadzo panguva ino kutora mukana weiyi mamiriro emari. Iwe haugone kukanganwa kuti ine kuvapo kwakasimba muUnited States, uye nekudaro iwe unofanirwa kucherechedza mhedzisiro yekukoshesa dhora nekuda kwesimba rinotengesa kunze kwenyika pamhedzisiro yako. Pane rimwe divi, Acerinox ndeimwe yemabheti akachengeteka kana iwe uchida kushanda mune ino yakakosha mamiriro. Mune ino kesi, nekuda kwezvikonzero zviri nyore kwazvo kune vashoma nevapakati varimi kuti vanzwisise. Iko kunopfuura hafu yebhenefiti yekushandisa uye chikamu chakanaka chemitero yacho zvinoenderana neAmerica. Chikonzero chakaringana kuzarura nzvimbo mune mamwe eaya maitiro isu atakafumura kwauri.
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti iyi mamiriro anogona kunyangarika pane imwe nguva kana imwe. Uye mhedzisiro yacho ichave yakapesana zvakasiyana. Mune mamwe mazwi, zvikamu zveaya makambani akanyorwa zvinodzikira, uye pamwe nehunyanzvi. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kuburitsa kurasikirwa kukuru mune yako mari chirevo. Nenjodzi iri pachena kwazvo yekuti iwe unogona kuita isingadiwe stock stock. Semuenzaniso, kugadzirisa kutanga kutengesa pamutengo uri kure kwazvo nekutenga. Semhedzisiro yekuzorora muzviito zvako mumisika yemari. Chinhu chakaipisisa chaungaite pamusika wemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Kudonha kweeuro kunokanganisa sei musika wemasheya?
Mutero weaseti transaction uye zvakanyorwa zviri pamutemo zviito